Ngwaọrụ Ahịa Kasị Ukwuu! | Martech Zone
Ee e, Agaghị m ekpughere teknụzụ ọhụrụ mara mma, magburu onwe ya, weebụsaịtị, ma ọ bụ mgbọ ọlaọcha ndị ọzọ nke ga-eme ka ụlọ ọrụ gị rute na nnukwu stardom.
Ana m ekwu banyere ya akwa ahịa. O yiri ihe doro anya iji kwuo nke ahụ. Onye ọ bụla maara na nnukwu ọrụ ndị ahịa bụ usoro egosipụtara iji bulie azụmahịa gị, mana site na ihe m hụworo, ọtụtụ ụlọ ọrụ echefuola ya. Ọ bụrụ na ha echefubeghị ya, opekata mpe ha anaghị enwe ohere iji mee ka olu ndị ahịa ha nwere obi ụtọ itolite azụmaahịa ha.
Onye ọ bụla nwere akụkọ egwu ha banyere ọrụ ndị ahịa na onye ọ bụla nwere akụkọ nke ha banyere nnukwu ndị ahịa. Dị ka ndị ahịa, anyị kwesịrị icheta na a na-agwa ndị ahịa na ndị ahịa ahịa ndị a akụkọ kwa ụbọchị. Ma ugbua - mmekọrịta mmadụ na ibe ya amụbawo mkparịta ụka ndị a!
Ọrụ ndị ahịa nwere ike ịkpụ ụzọ abụọ. Akụkọ ọjọọ ahụ nwere ike izipu atụmanya ọhụrụ na ndị ahịa dị ugbu a na ndị asọmpi gị. Oké akụkọ ahụ nwere ike iwetara ndị ahịa ọhụrụ na ahịa buru ibu. Ọ bụ ọrụ gị iji melite ọrụ ndị ahịa iji kwụsị ihe ọjọọ, ma nye bullhorn iji mee ka ihe ọma dịkwuo elu!
Yabụ kedu ka anyị ga-esi hụ na a na-akọ akụkọ a? N'oge na-adịbeghị anya, ahụwo m ụzọ dị ọnụ ala, nke dị mfe iji jide n'aka na a na-akọ akụkọ ahụ. Otu ụlọ ọrụ m maara na-enye ndị ahịa ohere ide na biputere akụkọ ha na blọgụ nke ụlọ ọrụ ahụ ma kesaa onye ọ bụla dị njikere ịgụ.
Companiesfọdụ ụlọ ọrụ amalitela netwọk ndị ahịa na Ning n'elu ikpo okwu. Ha na-eji netwọk ndị a dịka ntọala ihe ọmụma, ọgbakọ, oche enyemaka na saịtị ịgba akaebe niile na otu. Ọ bụ nnukwu ụzọ na - achịkọta ahụmịhe ndị ahịa ma tee ezi akụkọ banyere nnukwu ọrụ ndị ahịa gị.
Ya mere, gịnị ka ị na-eme iji jide n'aka na atụmanya gị nụrụ banyere nnukwu ọrụ ndị ahịa gị?
Tags: laura egburuWordPress
Nov 11, 2009 na 2:15 PM
Daalụ, daalụ, daalụ. Ekwenyere m na enyí n'ime ụlọ ahụ na mkparịta ụka teknụzụ ọ bụla ga-echefu mgbe niile banyere ndị ị chọrọ iji teknụzụ gị. Ọ bụrụ n’ichezọ ndị mmadụ, mgbe ahụ teknụzụ niile dị n’ụwa enweghị ike ime ka echiche gị baa uru ma ọ bụ baa uru.
Nov 14, 2009 na 7:40 PM
Julie, Daalụ! Ekwenyere m, teknụzụ dị naanị ka onye ji ya.
Nov 11, 2009 na 7:01 PM
Enweghị ike ikwu nke a. Ma ụlọ ọrụ * ka * adịghị ka ọ na-enweta ya. Nke a bụ ihe anyị na-amalite ikwu maka ndị ọzọ na blọọgụ anyị, anyị ga na-egwu ala miri emi banyere etu ụlọ ọrụ ga-esi si ahịa mgbasa ozi na-elekọta ndị ahịa na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ, mana m ka na-eche na ihe mbụ ị na-eme bụ ichetara ụlọ ọrụ na ahịa ọrụ bụ ihe kasị mma ahịa ngwá ọrụ si n'ebe.
Nov 12, 2009 na 2:07 PM
Achọpụtala m na ụlọ ọrụ ndị na-eche banyere ọrụ ndị ahịa amalitela iji mgbasa ozi mmekọrịta na-arụ ọrụ nke ọma. Site na edepụtara aha na saịtị nyocha iji zaa ajụjụ ndị ahịa nwere ike ịnwe, yana ọbụnadị na-ekwupụta mkpesa ngwaahịa na azịza ha n'ihu ọha. N'eziokwu, ọ dị ọtụtụ ihe a ga-eme tupu ọ ghọọ ebe nile.
Nov 12, 2009 na 11:00 PM
Adam kwuru nke ọma. Anaghị agbanyeghachi wiil ahụ, ọ na-eme ya ka ọ dịrị ya mfe ịkwaga. –Paul
Nov 14, 2009 na 7:38 PM
Nov 15, 2009 na 3:04 AM
Ọrụ ndị ahịa bụ otu n'ime ihe ndị ahụ na-enwekarị ekele maka ma jiri ya kpọrọ ihe. Mana ọ ga-amasị m ịhụ ha ka ha tụgharịrị. Inwe ezigbo aha ndị ahịa na - enye ụlọ ọrụ ohere mgbe ha amịpụ. Mana ha enwetala ohere ahụ.
Companiesfọdụ ụlọ ọrụ yiri ka ọ na-ewute ọrụ ndị ahịa n'ihi na ha enweghị njikwa ọ bụla. Agbanyeghị, ị ziri ezi n'ịsị na ọ bụ ngwa ahịa azụmaahịa kachasị ukwuu, ọkachasị mgbe ị tụkwasịrị okwu ọnụ gị ọnụ.
Jenụwarị 18, 2010 na 6:46 PM
Agbanyeghị na ọ dịka ọ kwesiri ị pụta ìhè na ị kwesịrị ịnwe ezigbo ndị ahịa, ọ dị ka ọ bụghị, na-ekpe ikpe site na ụlọ ọrụ ole na ole nwere ezigbo ọrụ.
Tom - Ndị mmekọ anya